SKU: 1146963-51-0. Category: Nootropics ntụ ntụ
Molekụla Formula: C18H17F3N2O2
Ọbara arọ: 350.3349896
Iji usoro ọgwụ nchọpụta ọgwụ maka ọrịa Alzheimer (AD) nke dabeere na ọtụtụ ọrịa nke agadi, anyị chọpụtara na ihe nwere ike ịmepụta ihe dị iche iche na ihe ndị na-eme ka anụ ahụ dị na AD. Ebe ọ bụ na onyinye a, J-147 ntụ ntụ, bụ phenyl hydrazide, enwere nchegbu na enwere ike itinye aka na amines / hydrazines aromatic nke nwere ike carcinogenic. Iji chọpụta nke a, anyị nyochare ndị metabolites nke J 147 ntụ ntụ na ụmụ mmadụ na òké microsomes na plausma òké. E gosiputara na J-147 (1146963-51-0) uzuzu adịghị etinye aka na amines aromatic ma ọ bụ hydrazines, na scaffold ahụ bụ nke zuru ezu, nakwa na ndị oxydative metabolites na-adịghịkwa arụ ọrụ. A kwubiri na isi ihe ndị na-emepụta ihe nke X XUMUM (147-1146963-51) ntụ nwere ike inye aka na arụ ọrụ ya na ụmụ anụmanụ.
J 147, nke sitere na curry spike component curcumin, nwere obere toxicity na n'ezie reverses mebiri na neurons metụtara Alzheimer si.
Na mbụ, ìgwè ahụ chọpụtara na ntụpọ J-147 nwere ike igbochi ma gbanwee mbelata nchekwa na ngwọta Alzheimer na ụmụ oke nwere ụdị ọdịdị Alzheimer, nke a na-ejikarị eme ihe. Otú ọ dị, ụdị ọrịa a gụnyere nanị ihe dịka 1 percent nke nsogbu Alzheimer. Maka onye ọ bụla ọzọ, ịka nká bụ isi ihe ize ndụ, kwuru Schubert. Ndị otu ahụ chọrọ ịchọpụta ihe onye ọgwụ ahụ na-aṅụ ọgwụ na ụmụ oke ya na-eto ngwa ngwa ma nwee ụdị nkwarụ nke yiri nke ahụ na-emetụta ọrịa mmadụ.
J-147 Powder Complete Guide and Review
J147 Drug Ahụmahụ (1146963-51-0) Alzheimer's Age
1 nyochaa maka J 147 ntụ ntụ
J 147 ntụ ntụ bụ ọgụgụ isi